Masinina Eps, bobongolo Eps ary kojakoja fitehirizana - Dongshen
Masinina fanamboarana block EPS
Masinina fanamafisana ny rivotra miampita rivotra
Masinina fanorenan-tsoloka vacuum
Milina fanitsiana block azo ahitsy
Masinina famolavolana endrika EPS
Milina famolavolana milina amin'ny vacuum
Masinina famolavolana endrika fitehirizana angovo
Rafitra Vacuum afovoany
Masinina manapaka EPS
Masinina manapaka ny takelaka EPS
Masinina fanapahana cnc
Bobongolo sy kojakoja EPS
Tetikasa EPS Raw Material
Fitaovana fitaovam-piadiana EPS
Hangzhou Dongshen Machinery Engineering Co., Ltd dia orinasa iray miatrika manokana ny milina EPS, bobongolo EPS ary kojakoja ho an'ny milina EPS. Afaka mamatsy karazana milina EPS isan-karazany toy ny EPS Preexpanders, Masinina miendrika endrika EPS, masinina miolakolaka EPS, milina fanapahana cnc sns manana ekipa teknika matanjaka izahay, manampy ny mpanjifa hamolavola ireo ozinina vaovao EPS ary hanome ireo tetik'asa EPS mihodina tanteraka. izy ireo, izahay koa dia manampy ireo ozinina EPS taloha hanatsara ny famokarany amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fanjifana angovo sy fampitomboana ny fahafahan'ny famokarana. Ankoatr'izay, manolotra ny serivisy amin'ny famolavolana milina EPS manokana izahay isaky ny fangatahan'ny mpanjifa. Izahay koa dia manamboatra lasitra EPS ho an'ny milina EPS marika hafa avy any Alemana, Korea, Japon, Jordania sns.
Vakio bebe kokoa +
Momba ny Masininay
Fahamarinana avo lenta
Ampiasainay ny fitaovana milina OKUMA marika voalohany an'ny sokajy voalohany hanodinana ny takelaka misy ny milina, ka avo ny fahamarinan'ny masininay.
Mampiasa fitaovana matevina hanamboarana milina izahay, ka mavesatra sy matanjaka kokoa noho ny mpifaninana hafa foana ny masininay, ary afaka mandeha maharitra kokoa ny masininay. Betsaka amin'ireo mpanjifanay no mbola mampiasa fitaovana efa 15 taona mahery.
Miasa haingana kokoa noho ny milina kilasy mitovy amin'ny mpifaninana hafa ny masininay. Ny mpanjifa dia afaka mahazo farafaharatsiny 10% avo lenta avoakan'ny masininay.
Ny ampahany nafarana sy ny kojakoja marika malaza dia mahatonga ny masinantsika hiasa tsara sy milamina, koa mampihena ny vidin'ny fikolokoloana milina.
SPY90-SPY120 Mpanaparitaka mitohy
PB2000V-PB6000V Vacuum karazana fanamboarana milina
PB2000A-PB6000A Rivotra fanamafisana ny rivotra ...
SPB2000A-SPB6000A EPS azo ovaina Type Block Mol ...
Miaraka amin'ny mpanjifaMiaraka amin'ny mpanjifa
Mandraisa anjara amin'ny fampirantiana EPS matihanina
Tao anatin'izay taona lasa izay dia nandray anjara tamin'ny fampiratiana ny milina EPS matihanina tany Jordania, Vietnam, India, Mexico ary Torkia sns isika. Nohararaotinay ny fampirantiana dia nifankahita tamina mpanjifa maro izahay izay efa nividy milina EPS taminay na dia tsy nifankahita aza, ary nahita namana vaovao marobe izay mikasa ny hanangana zavamaniry EPS vaovao. Amin'ny alàlan'ny fifandraisana mivantana, azontsika atao tsara ny mahatakatra ny zavatra takian'izy ireo, mba hahazoana vahaolana mety kokoa ho azy ireo. Anisan'ireo fitsidihan'ny mpanjifa isan-karazany, ny nahavariana ahy indrindra dia ny orinasa EPS iray ...
momba ny ICF (modely vita amin'ny beton vita amin'ny insulated)
ICF, Forma Concrete Insulated, any Shina koa dia antsoin'ny olona hoe modely EPS voaroaka na sakana EPS. Vita amin'ny milina famolavolana endrika EPS sy bobongolo ICF izy io. Ity karazana modely EPS ity dia tena mandaitra amin'ny insulate hafanana sy ny ins insulateur. Voasedra fa ny fitehirizana angovo ireo tranobe vita amin'ny bloc ICF dia mety hahatratra 65%. Ny sakana EPS ICF dia tsy manome fomba mahomby amin'ny fananganana insulement rindrina ivelany any amin'ny faritra mangatsiaka, fa koa mamaha ny olan'ny fananganana toy ny fametahana ny rindrin'ny rindrina ivelany, ary ny vanim-potoana fananganana lava. Ny modely ICF mifanohitra amin'ny ...
Nisy tantara novonoina Coronavirus tampoka nanakorontana ny varotra manerantany.
Nisy tantara novonoina Coronavirus tampoka nanakorontana ny varotra manerantany. Betsaka ny mpanjifa no manahy fa tsy manana injeniera hametraka na handrava ny milina novidian'izy ireo avy any Chine. Eny, marina fa mpamatsy maro no manana an'io olana io, fa tsy eto amin'ny orinasanay, satria ankoatry ny injeniera sinoa dia manana ihany koa izahay injeniera indianina tena za-draharaha, ary injeniera jordanianina. Tamin'ny volana novambra lasa teo dia nandeha tany Yemen ny injenieranay karana mba hametraka tsipika famokarana EPS Shape Molding Machine. Ny mpanjifa dia nividy ny EPS SHAPE MOLDING MACHINE LINE manontolo, ao anatin'izany ny EPS BATCH PREEXPANDER, SILOS, EPS SHAPE MOLDING MACHIN ...
Adress: Room 1407-1408, No.19 Jinping Road, Fuchun Street, Distrikan'i Fuyang, Hangzhou, Faritanin'i Zhejiang, Sina 311402